Nezvedu - Henzhen Ronghua Technology Co., Ltd.
Shenzhen Ronghua Technology Co., Ltd.yakavambwa muna 2013, inogadzira inyanzvi muR&D, kugadzirisa, kugadzira, kutengesa uye sevhisi yemamodule kamera, USB kamera modules, lenzi uye zvimwe zvigadzirwa.
Iyo kambani yakawana ISO9001, CE, ROHS, UL uye SGS zvitupa.Zvigadzirwa hazvingotengeswa zvakanaka muChina chete, asi zvakare zvinotengeswa kune dzakasiyana nyika nematunhu, kusanganisira Europe, America uye Southeast Asia.Isu tinoisa yakasimba yemhando yekutonga mune yega link kubva pakutenga zvinhu zvakasvibirira, kugadzirisa, kuyedzwa kusvika pakurongedza.Pamusoro pezvo, isu takazvipirawo kugadzira zvigadzirwa zvitsva kuti zvisangane nezvinodiwa zvakasiyana zvevatengi.
Isu tinogashirawo maodha eOEM neODM, uye tinopa masevhisi ekumira anosanganisira PCB, PCBA, SMT chigamba, PCBA post-soldering processing, kugadzirisa nezvinhu zvinopihwa, zvinhu zveOEM, maBOM anofananidza maodha, hurongwa uye kuyedza.
Kambani Front Desk
Chitupa Uye Hunhu
Vashandi vedu vane ruzivo uye vakazvipira kune yakasimba yemhando yekuongorora uye nekufunga kwevatengi sevhisi.Isu tinoshandisa otomatiki michina kunyatso kudzora kunaka kwezvigadzirwa uye kushandisa kwakasimba kwemhando yekudzora mune yega link kubva pakutenga zvinhu zvakasvibirira, kugadzirisa, kuyedzwa kusvika pakurongedza.Isu tinonamatira kumusimboti wekubatsirana uye tinonakidzwa nemukurumbira wakanaka pakati pevatengi vedu nekuti tinopa sevhisi yakakwana, zvigadzirwa zvemhando yepamusoro uye mitengo yemakwikwi.
Zvikamu zvina zveBhizinesi
Nyanzvi mukugadzirwa kweFPC kamera modules, SENSOR kamera modules, USB kamera modules, binocular kamera modules, AHD kamera modules, tsika kamera modules, LENS, nezvimwewo.
Chishandiso: imba yakangwara, Internet yezvinhu, nharembozha, midziyo yekurapa, capsule endoscopes, kuyedzwa tembiricha yemuviri, kuzivikanwa kwechiso, marobhoti akangwara, drones, mota, makamera anomhanya-mhanya, matoyi, DV, MP4, MID, QR kodhi scanner, barcode. scanning, yekutarisa makamera muindasitiri yekuchengetedza uye mamwe minda.
Iine mitsva yakawanda-yepamusoro-yekukurumidza SMT yekuisa mitsara yekugadzira, uye akasiyana-siyana otomatiki ekuyedza ekugadzira michina, kukwirisa otomatiki kunowanikwa zvisinei kuti iri 0201, 0402, BGA, FBGA, QFN, QFP kurongedza, kana ese marudzi akasiyana-akaumbwa zvikamu uye mamodule ekutaurirana. , iyo inogona kugutsa kugadzirwa kwako uye kugadzirisa zvinodiwa zvezvigadzirwa zvakasiyana.
Isu tinotarisisa kugadzirwa kwepamusoro-chaiyo kuburikidza-gomba FR4 single-sided PCB, maviri-mativi edunhu mabhodhi, multilayer circuit board, LED aluminiyamu substrates, FPC flexible circuit board, flexible and rigid boards, uye high-quality PCB board.
Kutengwa Kwezvinhu Zvokushandisa
Nevashambadziri vekushanda kwenguva refu, tinogona kutenga zvigadzirwa zvakawanda kuti tideredze mitengo.Isu tinoziva mabatiro ezvikamu zvakasiyana pamhando yekugadzirwa kwechigadzirwa, uye kumisikidza yakaomesesa yekuongorora uye yekuyedza sisitimu yekudzora kugadzirisa kunaka, kurasikirwa uye dzimwe njodzi, uye kuderedza kurasikirwa kwako.
Gadzira kukosha kune vatengi vedu!
Ipa zvigadzirwa zvepamberi zvetekinoroji!
Kurudzira kukura uye purofiti panguva imwe chete!
Kurudzira kuenderera mberi kwekambani uye kugadzira nzvimbo yakanaka yekushanda yevashandi vedu!